उज्ज्वल जी.सी., ( )
हो,जूनबाट आज तारा बनेकीछ्यौ तिमी
जिन्दगीको ठूलो सहारा बनेकीछ्यौ तिमी
अभावका नदीहरू यसै तैरेकोे हैन प्रिया !
हरक्षण प्रेमको धारा बनेकीछ्यौ तिमी ।
अँधेरी आकाशको जून बन्दै आयौ तिमी
सुमधुर सङ्गीतको धून बन्दै आयौ तिमी
हो, डुब्न लागेथ्यो अभावमा जिन्दगी मेरो
अनायासै अकबरी सुन बन्दै आयौ तिमी ।
हो, शक्ति र पैसा हुदा सबैले गन्दा रहेछन्
सानै काम गरे पनि वाह ! वाह ! भन्दा रहेछन्
जब समय निरीह बन्दै ओरालोतिर झरिन्छ
अरु होइन आफन्तहरू नै पराइ बन्दा रहेछन् ।